Git Sangit News » क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलालाई यौ’न स’म्बन्धको लागि द’बाब, नमाने खाना न’दिने ध’म्की !
क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलालाई यौ’न स’म्बन्धको लागि द’बाब, नमाने खाना न’दिने ध’म्की !
काठमाडौं। को’रोना सं’क्रमण फैलिने आ’शंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएका महिलाहरुसँग ना’जाय’ज माग गर्ने क्र’म बढेको पाइएको छ । पछिल्लो समय भारतको महाराष्ट्रको अमरावतीमा क्वारेन्टाइनमा राखिएकी एक गरिब महिलासँग गाउँकै एक व्यक्तिले यौ’न स’म्बन्धको माग गरेका छन् । यो घट’ना पछि गाउँमा हं’गामा भएको छ । महिलाको उ’जुरीपछि आ’रोपलिाई प’क्राउ गरिएको छ ।
गाउँकै पुलिस पाटिल म’दिराको न’शामा त्यहाँ आएर महिलालाई श’री”रिक सम्ब*न्धको लागि द’बाब दिएका थिए । घ’टना यही ठाउँको हो । गाउँका पुलिस पाटिल नामका व्यक्तिले महिलालाई शा’रीरिक स’म्बन्धको लागि द’बाब दिएका हुन् । महिलाले यसको उ’जुरी पुलिसलाई दिएपछि पुलिसले आ’रोपीलाई प’क्राउ गरेको छ ।
पुलिसका अनुसार मुम्बइबाट मजदूरहरुको एक परिवार गाउँ फर्केको थियो । नियमअनुसार उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । त्यही बेला गाउँकै पुलिस पाटिल म’दिराको न’शामा त्यहाँ आएर महिलालाई श’री”रिक सम्ब*न्धको लागि द’बाब दिएका थिए । उनले महिलालाई आफ्नो माग पूरा नगरे खाना नदिने ध’म्की दिए । महिला आ’त्तिएर चि’च्याएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । महिलाको गु’नासोपछि पुलिसलाई खबर गरिएको थियो
प्रकाशित मिति २४ भाद्र २०७७, बुधबार १०:४५